I-Villa Mimare - I-Airbnb
Indlu yesimanje kanye nezwe elimangalisayo liyancibilika ngaphandle kokuhlasela kwemvelo. Ukubuka akunakuqhathaniswa, 360 degrees ukusuka yonke indawo! Jabulela ukushona kwelanga okumangalisayo ngenkathi ulungiselela i-barbeque yakho kugalari ethokomele.
ICHIBI ALInalo UBIZO LOKUVIKELA. LE NDAWO AYINCUSIWE IMINDENI ENEZINSANE NOMA IZINGANE EZINGANE ENGAZI UKUDWAKAZI.
Le yindlu esanda kwakhiwa enomklamo wesimanje kanye nepulani yaphansi elula. Amawindi amaningi nokukhanya. Ikhishi elihlanganisiwe le-loft, ibha, kanye negumbi lokuhlala. Kunamakamelo amabili amakhulu ohlangothini ngalunye lwendlu anama-closets awo okuhamba nawo kanye nezindlu zokugezela ezigcwele. Kukhona indlu yokugezela engu-1/2 yezivakashi endaweni yegumbi lokuhlala. Yakhelwe endaweni engamahektare angu-2 enokubukwa okumangalisayo okungama-degree angu-360, mhlawumbe okungenye yemibono ehamba phambili edolobheni. Njengoba izungezwe imvelo nezindlela zokuhamba izintaba, lena ingaphezu kwendawo yokunqamula umsebenzi kanye "nokukushajwa kabusha amabhethri". Iyikhaya “lesitayela sendawo yokuhlala” elihlonyiswe ngokugcwele ngazo zonke izinsiza ongase ulindele ukuchitha iholidi likanokusho nesitayela. awusoze wakhohlwa!
Itholakala edolobheni elimangalisayo lase-Los Cocos lapho ungajabulela khona izintaba ezinhle nokubukwa kwesigodi. Umkhathi unokuthula futhi uyaphumula. Ibanga elifushane le-scenic drive elingamakhilomitha ayi-7 lizokuyisa edolobheni elihle laseLa Cumbre, lapho ungadlala khona igalofu kwesinye sezinkundla zegalofu ezinhle kakhulu zezwe. Uzothola nezindawo zokudlela zikanokusho kanye nenani elihle lezitolo nezitolo zokudlela lapho ungathola khona zonke izimpahla ezidingekayo ukuze uhlale. Ama-bungalows anesitayela se-cottage kanye nezingadi ziyifa labokufika baseBrithani abafika ekuqaleni kwekhulu lama-20. I-Cuchi Corral eseduze, iwa elibheke isigodi sase-Río Pintos elinokubukwa okugcwele, laziwa njengendawo yokwethulwa kwe-paragliding. Uhambo olufushane olunqamula umgwaqo owubhuqu oyinselele, luzokuyisa emigodini yokubhukuda emihle yase-Rio Pintos, lapho ungaphumuza khona futhi udlale emanzini ayo ahlanzekile.
Ababambisene nabo bazotholakala uma kudingeka.